အစ္စရေးကျောင်းသူ အသတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် လမ်းမများထက်တွင် အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံမှုရှိစေ?? - Yangon Media Group
အစ္စရေးကျောင်းသူ အသတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် လမ်းမများထက်တွင် အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံမှုရှိစေ??
မဲလ်ဘုန်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝ
သြစတြေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင် အစ္စရေးကျောင်းသူတစ်ဦး အသတ်ခံခဲ့ရပြီး နောက် လမ်းမများထက်တွင် အမျိုးသမီးများ လုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ အဓိကမြို့ကြီးများ တစ်လျှောက်တွင် ဇန်နဝါ ရီ ၂ဝ ရက်က လူ ထောင်နှင့်ချီ၍ စုရုံးဆန္ဒပြ ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ကျင်းပသော အမျိုးသမီးများ၏ စုရုံးပွဲ တစ် စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဆစ်ဒနီမြို့တွင် ပြုလုပ် သော ယင်းစုရုံးပွဲများတွင် လူသုံးထောင်ခန့် ပါဝင်သည်။ တက်ရောက်လာကြသူများက သြစတြေးလျမြို့များရှိ လမ်းမများထက်တွင် အမျိုးသမီးများ လုံခြုံမှုရှိစေရေးတို့ကို တောင်း ဆိုခဲ့ကြသည်။
ယခုသီတင်းပတ် အစောပိုင်း၌ သြစတြေး လျနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော မဲလ် ဘုန်းတွင် သူငယ်ချင်းများနှင့် ညဘက်လည် ပတ်ခဲ့ပြီးနောက် အိမ်ပြန်လမ်းလျှောက် လာ စဉ်တွင် အသက်(၂၁)နှစ်အရွယ် အာအီယာ မာဆာဝဲလ် အသတ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကို သတ်ဖြတ်မှုအတွက် အသက် (၂ဝ)အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို တရားစွဲဆို ထားသည်။
မာဆာဝဲလ် အသတ်ခံရမှုသည် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လတွင် ဟာသရှိုးတစ်ခု ဖျော်ဖြေပြီးနောက် အိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်လာ စဉ် မဲလ်ဘုန်းမြို့၌ပင် အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ် အာဒိုက်ဒီဇွန်၏ အသတ်ခံခဲ့ရသည့်ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဒေါသများ ကို တစ်ဖန်နိုးထလာစေခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် မာဆာဝဲလ်အတွက် အမှတ်တရအဖြစ် လူထောင်ပေါင်းများစွာ စုရုံးခဲ့ကြပြီး ၎င်းသေဆုံးခဲ့ရာ နေရာတွင် ပန်းများ ချထားခဲ့ကြသည်။ မာဆာဝဲလ် နောက်ဆုံးခရီးနှင်ခဲ့ရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ဇန်န ဝါရီ ၁၈ ရက်နှောင်းပိုင်းက ပန်းများကိုသာ တင်ဆောင်လာ သော အထူးဓာတ်ရထားတစ်စင်းကို မောင်းနှင်စေခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက်က ဆစ်ဒနီမြို့တွင် စုရုံးသူများသည် မာဆာဝဲလ်နှင့် အခြားအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရ သူများအတွက် ဂုဏ်ပြုစာတန်းများကို ကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ မာဆာဝဲလ်၏သေဆုံးမှုကြောင့် ဝန်ကြီးချုပ် စကော့မော် ရစ်ဆင်က ၎င်း၏အစိုးရအနေဖြင့် လာမည့်မေလတွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက် မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဒေါ်လာ ၂၅၂ သန်းတန်ဖိုးရှိ အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကြေညာမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
ဆိုမာလီတွင် အမေရိကန်တို့၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အယ်လ်ရှာဘတ် အစွန်းရောက် ၅၂ ဦးကို သ??
မြန်မာ့စပါး ပြည်ပသို့ တရားမဝင် ထွက်ရှိနေမှုများကြောင့် ရေရှည်တွင်ပြည်တွင်း ဆန်စက်လုပ်ငန်း?